Nepal Dayari | नुवाकोटका ३ फिटे गोपिले भित्र्याए ६ फिट अग्ली सुन्दरी ! जेठीले छाडेपछि चिठ्ठा पर्यो ? को हुन् यी महिला ?
नुवाकोटका ३ फिटे गोपिले भित्र्याए ६ फिट अग्ली सुन्दरी ! जेठीले छाडेपछि चिठ्ठा पर्यो ? को हुन् यी महिला ?
साउन ३१, २०७८ आइतबार ११०४ पटक हेरिएको
नुवाकोट – भनिन्छ मायामा न जात,धर्म,पेशा,उमेर र शारीरिक अवस्था सबै फिक्का हुन्छ। प्रेम सबै कुरा भन्दा माथी हुने गर्दछ। उचाइ मात्रै ३ फिट अग्ला भएका नुवाकोटका गोपि मिजार र उनकी श्रीमती सुनिता परियारको जोडी हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई भगवानले नै उदाहरणीय जोडीको रुपमा जुराएर पठाएका हुन्।
उनकी अहिलेकी श्रीमती सुनिता आफू गोपीको बारेमा सबैथोक थाहा पाएर पनि आएको बताएकी छिन्।उनले गोपीको बारेमा बिभिन्न भिडियोहरू समेत हेरेको र उहाँ प्रती माया तथा सहानुभूति जागेका कारण गोपिलाई साथ दिन आएको र जीवनभर साथ दिने पनि बाचा गरेकी छिन्।उनको रुप र उनले दिएको साथ हेर्दा उनले गोपिलाई निस्वार्थ प्रेम गरिएको प्रष्ट झल्किएको देखिन्छ।आशा छ उहाँहरूको जोडी सदैव यसरी नै हाँसीखुसी रहिरहोस्। नुवाकोट एक्सप्रेस बाट
तल भिडियोमा दुबैको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस।